FILOHA ANDRY RAJOELINA : Mifankahazo am-po tanteraka amin’ny mponin’Ambilobe
Ao anatin’ny fitsidiham-paritra ho fampahafantarana an’ilay vina ho fandraisan’andraikitra amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara ny filohan’ny tetezamita teo aloha, Andry Rajoelina amin’izao fotoana izao. 13 mars 2018
Mifankahazo am-po tanteraka amin’ny mponin’Ambilobe ny filoha Andry Rajoelina. Omaly dia nanatanteraka fihaonana manokana tamin’ireo tsongoin’ olom-bolo any an-toerana indray ny tenany. Anisan’izany ny raiamandreny ara-panahy, ireo mpandraharaha maro ao anatin’ny Faritra Diana ary ny mpanjakan’Antakarana Tsimiaro III. Tao amin’ny trano fisakafoanana Lémurien tao Antafiakasaka, ao an-tampon-tanànan’Ambilobe no nihaonany tamin’ireo raiaman- dreniben’ny tanàna ireo izay noentiny nanazavana amin’ny antsipiriany ny votoatin’ny IEM na ny vinan’ny fandraisan’andraikitra ho amin’ny fampandrosoana ny firenena.
Nohamafisin’ny filoha Rajoelina ombieny ombieny fa tsy misy resaka politika velively izao fitetezam-paritra ataony izao mba hialana amin’ny hisian’ny filazana hoe “manao fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana”. Fanamby efa napetrany ihany koa ny hitety an’i Madagasikara hampahafantatra ny vahoaka Malagasy tsy vaky volo ireo tetik’asany rehetra ao anatin’ilay Iem. Tanteraka izany ankehitriny, nahomby ny fitsidihana nataony tany Ambilobe ary miray fo sahady ny filohan’ny tetezamita teo aloha, Andry Rajoelina sy ny mponin’Ambilobe.
Porofon’izany ny fahafenoin’ ny kianja monisipaly tao an-toerana afak’omaly izay nitafany mivantana tamin’ny vahoak’Ambilobe. Nambarany fa vonona hihaino ny hetahetan’ny mponina ny tenany ary vonona hanatanteraka izay fangatahan’izy ireo ihany koa satria fotodrafitrasa maro no mbola tsy misy any an-toerana toy ny hopitaly sy ny maro hafa. Ankoatr’izay, tahaka ireo efa nangataka dia manantena sy manankina fahavitan-javatra maro amin’ny filoha mpanorina ny Iem ny vahoakan’Ambilobe rehefa tonga eo amin’ny fitondrana ny tenany.
FILOHA ANDRY RAJOELINA
2018-03-13 21:22:48 par bbordeaux 33000
Tohizo rjoelina.tafiho koa Any tulear .àla bato anie ahalany io filohan dahalo io eo raha lany eo e.